देश बिकासको लागि खेलकुदमै छ भबिस्य-पहिलो पाइला हामी चाल्दै छाै, हामी जस्तो लाखौं पाइलाहरु चाल्नु – BANKE POST
Posted on February 29, 2020 February 29, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
१७ फाल्गुन, बाँके । समृद्दि सम्भाव छ हाम्रो पाला, मिलि बनाऔं गौतम बुद्ध रङ्गशाला भन्ने मुल नारा र उदेश्यका साथ अगाडि बढी रहेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन लाई अझ नेपालगन्ज ( बाँके ) बाट सहयोग, साथ र हौसला प्रदान गर्नको लागि नाइस नेपालको आयोजनामा समाजसेवी, विद्यार्थी भाइबहिनीहरु रकम संकलन गरि रहेका छन ।
नाइस नेपालगन्जले आयोजना गरेको फाल्गुन १६ गते देखि चैतको ५ गते सम्म जारी रहने अभियानलाई नेपालगन्जका केही संस्थाहरुले समर्थ जनाउदै साथ दिएका छन । बास नेपालगन्ज, दोस्रो नेपालगन्ज महोत्सव, पिके इभेन्ट प्रा. लि, एक्टिभ युथ क्लब, र नेपालगन्जका सम्पुर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरु ले समर्थन गरेर हौसला आयोजकको हौसला बढाएका छन ।
नेपाललाई बिकास गर्नका लागि खेलकुदमा छ भबिस्य भन्ने उनी हरुको भनाइ छ। दानको लागि हैन स्वर्ग जस्तो देश नेपालको शानको लागि हामी अगाडि पाइला बढाइ रहेको छाै, सो कार्यमा सहभागी निश्चल न्यौपानेले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन । हाम्रो उदेश्य नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण रहेको बताए ।
असोक रावल अनुसार पहिलो दिन १६ गते शुक्रबार उनीहरुले रु ७२१५ संकलन गरेका छन । उनले जानकारी दिए अनुसार यो अभियान बाँके भरि निरन्तरता दिने हो र बाँकेमा रहेको ८ नगर मै उनी हरुले संकलन गर्ने बताए ।
सो कार्यको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले नाइस नेपाल लाई अनुमती प्रदान गरिएको हो । पहिलो पाइला हामी चाल्दै छाै, हामी जस्तो लाखौं पाइलाहरु चाल्ने छन भन्ने उनीहरु अपेक्षा राखेका छन ।
निस्वार्थ भावनाका साथ समाजिक कार्यमा नाइस नेपालमा सहभागी भाइ बहिनी हरु जस्तो हामी पनि सहभागी भइ पाइला चाल्दा कस्तो हुन्छ होला??
१७ जेठ, बाँके । नेपालमा थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु सबै कपिलबस्तुका हुन् । जिल्लाको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका १६ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका ३३ जना पुरुष, कृष्णनगर नगरपालिकाका १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका १६ जना पुरुष, यशोधरा गाउँपालिकाका १६ वर्षदेखि ४८ वर्षसम्मका २६ जना पुरुष र २५ र १९ वर्षका दुई जना महिला […]